David Nicholson wuxuu ku biiray McKnight bishii Sebtember 2020 sida Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (Jaaliyadaha) agaasimaha barnaamijka. Barnaamijka Jaaliyadaha ayaa ujeedadiisu tahay u dhisaan mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.
Sida agaasimaha fulinta ee Headwaters Foundation Caddaaladda, Aasaaska bulshada ee cadaalada bulshada ee gobolka Minnesota, wuxuu diirada saaray dhisida dimoqraadiyada dadka ku shaqeysa iyo helitaanka meelaha ay iskaga kala gooshaan kooxaha iyo danaha kaladuwan. Wuxuu soo bandhigay Mashruuca Bixinta Minnesota gudaheeda, waa moodal tabaruc ah oo cusub oo keenaya kooxo kala jaad ah, kooxo dad kala jaad ah oo ka wada socda sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen deeqaha bulshada ku saleysan.
Hore shaqadiisa, Nicholson wuxuu u shaqeeyey agaasimaha barnaamijyada Ain Dah Yung (Xaruntayaga), xarun dhaqan ku saleysan oo u adeegta qoysaska iyo dhalinyarada Dhaladka ah. Waxa kale oo uu shan sano ku qaatay farsamaynta siyaasadaha dawladda gobolka isagoo agaasime ka ahaa Sanduuqa Aasaasiga ee Carruurta, waa barnaamij lala kaashanayo bulshada maxalliga ah si loo joojiyo xadgudubka carruurta.
Nicholson waxay ka shaqeysay guddiyada aan macaash doonka aheyn in kabadan 20 sano, 10 kamid ah waxay kujireen doorarka hogaaminta guddiga. Wuxuu sidoo kale kasoo shaqeeyey guddiyada samafalka qaranka, gaar ahaan kuwii hore Isweydaarsiga Maalgelinta, wadashaqeyn qaran oo ka kooban 17 aasaaska caddaaladda bulshada.
Astaamaha David Nicholson Luulyo 2020